Lo ngumgaqo-nkqubo we-opskar.com wokuhlonipha imfihlo yakho malunga nalo naluphi na ulwazi esinokuluqokelela ngelixa sisebenzisa iwebhusayithi yethu.
Njengabaqhubi abaninzi bewebhusayithi, i-OPS iqokelela ulwazi olungazichazanga ngokobuqu lolu hlobo lwebrawuza kunye neeseva ezenza ukuba zifumaneke, ezinje ngohlobo lwesikhangeli, ukhetho lolwimi, indawo ekubhekiswa kuyo, kunye nomhla kunye nexesha lesicelo ngasinye somtyeleli. Ukuqokelela ulwazi olungachazwanga buqu kukuqonda ngcono ukuba iindwendwe ze-OPS zisebenzisa njani iwebhusayithi yayo. Amaxesha ngamaxesha, i-OPS inokukhupha ulwazi olungelulo oluchongiweyo kumdibaniso, umzekelo, ngokupapasha ingxelo malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi yayo.
I-OPS iphinda iqokelele ulwazi olunokuthi lusetshenziswe ngokwabo njenge-Intanethi ye-intanethi (IP) idilesi ezingena kubasebenzisi kunye nabasebenzisi abashiya izimvo kwi-blogs / sitesayithi ye-opskar.com. I-OPS ibonisa kuphela ukungena kumsebenzisi kunye neengxelo ze-IP idilesi phantsi kweemeko ezifanayo ezisetyenziswayo kwaye zichaze ulwazi oluchongiweyo oluchazwe ngabanye, ngaphandle kokuba idilesi ze-IP kunye needilesi ze-imeyile zibonakala kwaye zichazwe kubalawuli beblogi / isayithi apho izimvo e seleyo.
Ukuqokelela Iinkcukacha Zomntu
Abanye abatyeleli kwiiwebhusayithi ze-OPS bakhetha ukunxibelelana ne-OPS ngeendlela ezifuna i-OPS ukuba iqokelele ulwazi oluchonga ubuqu. Ixabiso kunye nohlobo lolwazi oluqokelelwa yi-OPS luxhomekeke kubume bokunxibelelana. Umzekelo, sicela iindwendwe ezibhalisela ospkar.com ukuba zinike igama lomsebenzisi kunye nedilesi ye-imeyile. Abo babandakanyeka kwintengiselwano kunye ne-OPS bayacelwa ukuba banikezele ngolwazi olongezelelekileyo, kubandakanya njengoko kufuneka ulwazi lomntu kunye nolwezemali olufunekayo ukuqhubekeka. Kwimeko nganye, i-OPS iqokelela olo lwazi kuphela njengoko kufanelekile okanye kufanelekile ukufezekisa injongo yokunxibelelana kwabatyeleli ne-OPS. I-OPS ayichazi ulwazi oluchonga ubuqu ngaphandle kokuchazwa ngezantsi. Kwaye iindwendwe zihlala zala ukubonelela ngolwazi oluchonga ubuqu, kunye nomqolomba onokuthi ubathintele ekuzibandakanyeni kwizinto ezithile ezinxulumene newebhusayithi.
I-OPS inokuqokelela iinkcukacha malunga nokuziphatha kwezivakashi kwiiwebhusayithi zayo. I-OPS ingabonisa olu lwazi luluntu okanye lunikeze kwabanye. Nangona kunjalo, i-OPS ayibonakali ulwazi oluthile-ngaphandle kokuchazwe ngezantsi.
Ukukhuselwa kweNkcukacha ngeNkcukacha yokuLuntu
I-OPS ityhila ulwazi olunokuthi lubonakalise ubuqu kunye nokuchonga ubuqu kuphela kwabo baqeshwa, iikontraki kunye nemibutho esebenzisana nayo (i) ekufuneka ilwazi olo lwazi ukuze iqhubekeke egameni le-OPS okanye ibonelele ngeenkonzo ezikhoyo kwiiwebhusayithi ze-OPS, kwaye ( ii) avumile ukuba angayichazi le nto kwabanye. Abanye babaqeshwa, iikontraki kunye nemibutho emanyeneyo inokubakho ngaphandle kwelizwe lakho; ngokusebenzisa iiwebhusayithi ze-OPS, uyavuma ukudlulisela olo lwazi kubo. I-OPS ayizukurenta okanye ithengise ulwazi olunokuthi lubonakalise ubuqu kunye nokuchonga ulwazi kuye nakubani na. Ngaphandle kwabasebenzi bayo, iikontraki kunye nemibutho esebenzisana nayo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, i-OPS ichaza ulwazi olunokuchonga ubuqu kunye nokuchonga ulwazi lobuqu kuphela ekuphenduleni isupina, umyalelo wenkundla okanye esinye isicelo sikarhulumente, okanye xa i-OPS ikholelwa ngokuthembekileyo ukuba ukubhengeza Kuyimfuneko ukukhusela ipropathi okanye amalungelo e-OPS, amaqela esithathu okanye uluntu ngokubanzi. Ukuba ungumsebenzisi obhalisiweyo wewebhusayithi ye-OPS kwaye ubonelele ngedilesi ye-imeyile, i-OPS ngamanye amaxesha inokukuthumelela i-imeyile ukukuxelela ngezinto ezintsha, ukucela ingxelo yakho, okanye ukukugcina unolwazi malunga nokwenzekayo nge-OPS kunye iimveliso. Ukuba usithumela isicelo (umzekelo nge-imeyile okanye ngenye yeendlela zethu zokunika ingxelo), sinelungelo lokuyipapasha ukuze isincede okanye icacise isicelo sakho okanye isincede sixhase abanye abasebenzisi. I-OPS ithatha onke amanyathelo ayimfuneko ukukhusela ekufikelelekeni okungagunyaziswanga, ukusetyenziswa, utshintsho okanye ukutshatyalaliswa kolwazi olunokuchonga ubuqu kunye nolwazi lomntu.
Icookie ngumtya wolwazi olugcinwa yiwebhusayithi kwikhompyuter yabatyeleli, kwaye isikhangeli somtyeleli sibonelela kwiwebhusayithi ngalo lonke ixesha umtyeleli ebuya. I-OPS isebenzisa ii-cookies ukunceda inkampani yakho ichonge kwaye ilandelele iindwendwe, ukusetyenziswa kwazo kwiwebhusayithi ye-OPS, kunye nokukhetha ukufikelela kwiwebhusayithi. Iindwendwe ze-OPS ezinganqweneli ukuba ii-cookies zibekwe kwiikhompyuter zazo kufuneka zisete iibrowser zazo ukuba zenqabe ii-cookies ngaphambi kokusebenzisa iiwebhusayithi ze-OPS, kunye nokubuyela umva kwezinye izinto zewebhusayithi ze-OPS ezinokuthi zingasebenzi kakuhle ngaphandle koncedo lweicookies.
Ukuba i-OPS, okanye yonke impahla yayo, ifunyenwe, okanye kwimeko apho kungenakwenzeka ukuba i-OPS iphume kwishishini okanye ingena kwi-bankruptcy, ulwazi lomsebenzisi luya kuba lunye lwefa elidluliselwayo okanye elifunyanwa ngumntu wesithathu. Uyavuma ukuba olo tshintshelo luya kwenzeka, kwaye nayiphi na umntu ofumana i-OPS unokuqhubeka nokusebenzisa ulwazi lwakho lomntu njengoko kuchazwe kulo mgaqo-nkqubo.
Izikhangiso ezibonakala kwiziko lewebhu ziyakwazi ukuhanjiswa kubasebenzisi ngabalingani bezentengiso, abanokubeka ii-cookies. Ezi khukhi zivumela umncedisi we-ad ukuba aqaphele ikhomputha yakho rhoqo xa ekuthumela i-adversi ye-intanethi ukuqokelela ulwazi malunga nawe okanye abanye abasebenzisa ikhompyutha yakho. Le ngcaciso ivumela amanethiwekhi amanqaku, phakathi kwezinye izinto, ukuhambisa iintengiso ezijoliswe kuzo ezikholelwa ukuba ziya kuba nomdla kuwe. Lo Mgaqo-nkqubo weMfihlo ubandakanya ukusebenzisa i-cookies nge-OPS kwaye ayigqugquzeli ukusebenzisa i-cookie ngabani nabathengisi.
Umgaqo-nkqubo weNgcaciso utshintsho
Nangona uninzi lweenguqu ezinokubakho zincinci, i-OPS inokutshintsha uMgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha, nakwimbono ye-ops kuphela I-OPS ikhuthaza iindwendwe ukuba zijonge eli phepha rhoqo ngalo naluphi na utshintsho kuMgaqo-nkqubo wabucala. Ukuba uneakhawunti opskar.com, unokufumana isilumkiso esikwazisa ngolu tshintsho. Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kwesi siza emva kwalo naluphi na utshintsho kulo Mgaqo-nkqubo wabucala kuya kwenza ukuba ulwamkele olo tshintsho.